Umphathiswa Wezokhenketho Undwendwela amaZiko amaZantsi oKhenketho eMzantsi Mahé
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Umphathiswa Wezokhenketho Undwendwela amaZiko amaZantsi oKhenketho eMzantsi Mahé
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Amaziko amancinci oKhenketho eMzantsi Mahé
Umphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho, u-Ambassia Sylvestre Radegonde uphinde waqalisa uthotho lokutyelela ngokusesikweni amaqabane kushishino lokhenketho ngolwesiHlanu odlulileyo, nge-23 kaJulayi, eqala e-Anse Royale. Oku kubandakanya iindawo zokumisa ezisithoba eMzantsi Mahé ezinomthamo wamagumbi angaphantsi kwama-20.
Umphathiswa Wezokhenketho uRadegonde wathi uyakhuthazeka ngumgangatho ophakamileyo wokuhlala kumaziko amancinci atyelelweyo.
Uninzi lwabanini beehotele bavumile ukuba baphumelele ngokuhlala kwiipesenti ezili-100 kwezi nyanga zidlulileyo.
Ukuhanjiswa kweendwendwe kwindawo ekubonakala kuyo kubonakala kulungelelaniswe phakathi kwamashishini amancinci kunye amakhulu.
Olu tyelelo ibe lithuba elihle kuMphathiswa uRadegonde kunye noNobhala oyiNtloko wezoKhenketho (i-PS), UNkosazana Sherin Francis ukuba bazibonele ngokwabo iimveliso ezinikwa abatyeleli ngendawo ekuyiwa kuyo.
UMphathiswa uRadegonde uxele ukuba uyakhuthazeka ngumgangatho ophakamileyo wokuhlala kumaziko amancinci atyelelweyo.
“Olu tyelelo lube neziqhamo kakhulu ekuqinisekiseni ukuba amaqondo okuhlala awanelisa kakhulu amaziko ethu amancinci, uninzi lwabanini beehotele bavuma ukuba bafikelele kwi-100% lokuhlala kwezi nyanga zidlulileyo. Kubonakala ngathi kukho ulwabiwo olulinganayo lwabatyeleli kwindawo esiya kuyo, ngokuchaseneyo nembono yokuba iindwendwe zethu zithanda iindawo ezinkulu, ”utshilo uMphathiswa uRadegonde.
Ucacisile ukuba uyavuya kuba eye wakwazi ukukuqinisekisa ukuzibophelela kwesebe lezokhenketho kuwo onke amaqabane buqu.
"Icandelo likulungele ukunceda amaqabane ukuphucula imveliso yawo kunye nokuhanjiswa kweenkonzo kunye nokubonelela ngokubonakala kwabo kunye nentengiso ngokubanzi."
Kwicala lakhe, u-PS Francis ucacisile ngokubaluleka kolu tyelelo e-ofisini yakhe ngokuhambelana nezinto eziphambili ezandlalwa lisebe lakhe ngoJuni walo nyaka.